I-La Maison du Bayou Petite Anse - I-Airbnb
I-La Maison du Bayou Petite Anse
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Darren
U-Darren Ungumbungazi ovelele
I-La Maison du Bayou Petite Anse itholakala ngaphesheya kwe-Bayou Petite Anse ngombono we-Louisiana swamp enezihlahla ze-okhi ezibukhoma kanye ne-palmettos. Yizwa imisindo enokuthula yendawo yokuhlala i-Acadiana enayo. Jabulela i-Cajun Country yangempela ehlala kuleli khaya elisendaweni engaphandle kwe-New Iberia.
Imizuzu engu-10 ukusuka ku-Tabasco Plant & Jungle Gardens, Avery Island, LA. Futhi imizuzu engu-10 ukusuka e-Jefferson Island & Delcambre. Imizuzu engu-15 ukusuka e-Abeville nemizuzu engu-30 ukusuka e-Lafayette.
Thatha uhambo emgwaqeni ofile oya e-bayou bese ubona amasimu eshukela enza i-New Iberia ibe mnandi kakhulu. Jabulela ikhofi lakho emphemeni ongemuva we-La Maison ngenkathi ubuka amahhashi nenqolobane eduzane.
I-La Maison ihlotshiswe ngetimu yase-Spain & Yomdabu yaseMelika enesiko lethu le-Cajun ngokuxuba. Ikhaya linamakamelo okulala angu-2 kanye negumbi lokugeza elilodwa. Ubhavu uneshawa enesibuko esikhulu esihle sokuzilungiselela. Umshini wokuwasha nokomisa utholakala egumbini lokugezela. Ikamelo lokulala elikhulu linombhede omkhulu ongu-1. Ikamelo lokulala lesivakashi linombhede olala umuntu oyedwa. Ikhipha ukuze yenze umbhede owodwa ngezansi. Lo mbhede ungasetshenziselwa izivakashi ezingu-2. Ikhishi linefriji/i-freezer, isitofu, uhhavini, i-microwave, ibhodwe lekhofi nakho konke okudingayo ukulungiselela ukudla futhi ukujabulele. Izihlalo zetafula ezingu-6 ne-bar ehlala abantu abangu-4.
Uma uthanda ukupheka ngaphandle kunomgodi wokushisa inyama onezindawo zokuhlala eziningi ngezansi ne-outhouse. Letha imicibisholo yakho yohlobo lwe-marshmals nama-hotdogs ukushisa emgodini womlilo. Izingane zihlala zijabulela umlilo omuhle wokukhempa.
Sinekheshi labantu abakhubazekile, abakhubazekile noma isivakashi esinemithwalo emikhulu esindayo.
Kunenqwaba yokupaka eceleni kwekhaya. Izinja zamukelekile uma zingaphansi kwamakhilogremu angu-25. & zigcinwe ekhoneni ngaso sonke isikhathi ngenkathi zingaphakathi endlini.
Uma ufuna ukuzwa ukudla kwangempela kwe-cajun ufike endaweni efanele. Kunezindawo zokudlela eziningana eziseduze ezinikeza lokho kuphela ongakunambitha futhi ukujabulele e-Cajun Country. Zama i-gumbo yethu yokudla kwasolwandle, i-shrimp ethosiwe, i-crawfish ebilisiwe, ama-oyster noma ukuthi injani i-boudin esinkweni sase-France. Singathanda ukuba nawe. Woza ubone ukuthi kungani i-New Iberia iyindawo enhle kunazo zonke nxazonke.
Lena indawo ethulile yezwe. Sinomakhelwane abahle futhi besilokhu silapha iminyaka eminingi.
Indawo yokudlela umndeni wethu ujabulela futhi uyayithanda: I-Duffy 's Diner, i-New Iberia- ama-hamburger amahle amamayela angu-7 kude. Indawo yokudlela yase-Tabasco 1868, i-Avery Island-crawfish etouffee amamayela angu-5. I-Cafe Jefferson, i-Jefferson Island, i-LA-gumbo enendawo enhle yokubuka i-Lake Peigneur eqhele ngamakhilomitha angu-7. Ukudla Kwasolwandle kwase-Dupuy kanye ne-Steakhouse, i-Abeville, i-LA-seafood gumbo, i-tuna eyosiwe, ipuleti lokudla kwasolwandle elingamakhilomitha angu-14.
R & M Boiling Point, New Iberia, LA-boiled shrimp & crawfish amamayela angu-11. I-Big John 's, i-Erath, i-LA-boiled crawfish eqhele ngamakhilomitha angu-9. I-Shucks Seafood Restaurant, Abbeville, LA-chargrilled oysters amamayela angu-15 kude. I-Pelican 's On the Bayou,
I-New Iberia, la- onion rings & mayelana nakho konke ngomculo we-Cajun oqhele ngamakhilomitha angu-7.
I-Landry 's Seafood & Steaks, i-New Iberia, i-LA-seafood buffet ngenkathi ulalele umculo we-cajun oqhele ngamakhilomitha angu-6. I-Randol 's Cajun Restaurant, i-Lafayette, izidlo zokudla kwase-LA & ukudansa ukuze uphile amaqembu e-cajun aqhele ngamakhilomitha angu-22.
I-Bon Creole Lunch Counter,
I-New Iberia, i-LA-soft shell crab poboys & fried shrimp poboys (okumnandi) amamayela angu-11 kude. I-Hot Food Corner, i-Delcambre, i-la- thatha izidlo zantambama ze-shrimp ezithosiwe, imigqa yenkukhu & ama-hamburger amamayela angu-5 kude. U-Legnon Boucherie, e-New Iberia, LA-boudin amamayela angu-11. I-Suire 's Grocery & Restaurant, Kaplan, LA-turtle sauce picante amamayela angu-24 kude. I-Cafeteria ka-Victor, i-New Iberia, isidlo sasekuseni esikhulu sase-LA esiqhele ngamakhilomitha angu-9. I-Makehe 's Donut King, i-New Iberia, i-LA-donuts & king cakes amamayela angu-9.
Okwenziwayo endaweni umndeni wethu ujabulela:
I-Sugarena, i-New Iberia, i-LA-livestock imisebenzi eqhele ngamakhilomitha angu-8. I-Avery Island Tabasco Plant & Jungle Gardens, Avery Island, LA-scenic view and tour of the Island miles 4 away. I-Rip Van Winkle Gardens, i-Jefferson Island, izingadi zase-LA kanye nokuvakasha okungamakhilomitha angu-7. Imibono ku-Teche, New Iberia, LA-tours kuleli khaya lesitshalo elingamakhilomitha angu-9. I-Zoosiana, i-Broussard, i-LA-zoo enemisebenzi eminingi yezingane eqhele ngamakhilomitha angu-15.
I-Rock'n' Bowl de Lafayette, i-Lafayette, i-LA-bowling ejabulisayo namabhendi abukhoma nokudla amamayela angu-26 kude.
I-New Iberia City Park, i-New Iberia, i-LA-park ku-Bayou Teche amamayela angu-10. I-Planet Ice Rank, i-Lafayette, i-LA-ice skating amamayela angu-26. Isiteshi Sokuphakamisa, i-Broussard, ipaki ye-LA-trampoline eqhele ngamakhilomitha angu-17. I-Premium I-Longes yase-Acadiana, i-Lafayette, i-LA-bowling & tag amamayela angu-25 kude. I-Grand Theatre, i-New Iberia, LA-movies amamayela angu-10. I-Crowley Rice Arena, i-Crowley, i-LA-kid rodeos amamayela angu-49. I-Lake Fausse Pointe State Park, St Martinville, LA-ukudoba okukhulu okungamakhilomitha angu-33. I-Palmetto Island State Park, i-Abeville, imizila yokuqwala izintaba yase-LA kanye nemizila yokuqwala izintaba eqhele ngamakhilomitha angu-25. I-Cypremort Point State Park, i-Cypremort Point, i-LA-man eyenziwe ebhishi, imisebenzi yokudoba neyezikebhe eqhele ngamakhilomitha angu-30.
I-St Peter 's, i-New Iberia, i-LA-church amamayela angu-9. I-St John' s, i-Impera, i-LA-church iqhele ngamakhilomitha angu-15.
Umndeni wethu uphinde ujabulele imikhosi eminingi ehlinzekwa yi-Acadiana. Nakhu okumbalwa endaweni yethu: Ekupheleni kuka-September kukhona Umkhosi wethu we-Sugar Cane e-New Iberia. Ngo-October yindawo yethu edumile ye-Gumbo Cook Off edolobheni lase-New Iberia. Ukuphela kuka-August yi-Delcambre 's Shrimp Festival. I-shrimp iphekiwe noma kunjalo uyayithanda. U-Erath unomcimbi ka-4 kuJulayi.
Kunemikhosi engu-400 Louisiana eyenzeka unyaka ngamunye. Sigubha ukulima, umculo, ukudla okumnandi kanye nanoma yini. Izikhala yilapho uhlala nathi kukhona umkhosi kwenye indawo e-Louisiana.
Y 'all come and see us! Singathanda ukuba nawe.
Sihlala eduze futhi siyatholakala kunoma yiziphi izidingo noma imibuzo ongaba nayo.
UDarren Ungumbungazi ovelele